दक्षिण एसिया भारतको हैकमबाट मुक्त हुँदैछ टिप्पणी
१.दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन(सार्क)को विघटन
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को नेतृत्व स्वभाविक रुपमा भारतको पोल्टामा पर्दथ्यो । भारत र पाकिस्तानको विवाद पछि सार्क अघोषित विघटनमा परेको छ । भारतले पाकिस्तान विनाको सार्र्क बनाउन चाहान्छ, त्यो कुराले अरु देशहरुबीच विश्वसनियता प्राप्त गर्न सकेन । त्यसो त सार्कमा चीनको प्रवेश गर्ने इच्छा र प्रस्ताव आएपछि स्वभावीक रुपमा भारत यो संगठनप्रति निरुत्साहित बन्योे । वास्तवमा भन्ने हो भने सार्कमा मुख्य रुपमा भारतको साम्राज्य थियो । पाकिस्तान पनि मधुर स्वरमा मात्र भारतको विरोध गर्दथ्यो । नेपाल, भुटान र वंगलादेशमा त भारतको बोलवाला नै चल्दथ्यो । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपमा पनि भारतीय हस्तक्षेप हुन्थ्यो । शायद यि देशहरु भारतीय उपग्रह जस्तै वनेका थिए । भारतले आफू बाहेक अन्य देशमा अस्थिरता निम्त्याउने योजना, षडयन्त्र र गेमप्लान गरीरह्यो । सत्तामा टिक्नका लागी भारतीय शाशक वर्गको गुलामी गरीरहनुपर्ने विवशता कायम थियो । छिमेकी र साना देशहरुसँग सीमा अतिक्रमण गरीरहने भारतको मूल नीति रह्यो ।
देशभित्रका स–साना मुद्धामा पनि भारतीय हस्तक्षेपबाट छिमेकी देशहरु आजीत छन् । भारतले हालसम्म पनि आफू प्रतिकुलका नेता वा पार्टीहरु हाबी भएमा तिनीहरुको हत्या गर्र्ने वा पार्टी फुटाइदिने रणनीतिलाई भारतले मुख्य सुत्र बनाईरहेको देखिन्छ । नेपालमा अस्थिरता भएको बेलामा सीमा मिच्ने र बंगलादेशमा बाढी आएको बेला सीमा अतिक्रमण गर्ने भारतको साम्राज्यवादी नीति अहिले पनि जारी छ । नेपालको कर्मचारी सरुवा, बढुवादेखि मन्त्रीमण्डल निर्माणमा समेत भारतीय हस्तक्षेप जारी रहन्थ्यो । जसले भारतीय शासक वर्गको गुलाम गर्र्न सक्यो र जो भारतको दलाल बन्न सक्यो, उही यहाँका संसदीय पार्टीमा हावी हुने परिस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री बन्दा नदीनाला नै भारतलाई बुझाउनुपर्ने बिडम्बना हामीकोमा थियो । पछिल्लो समय महाकाली सन्धीको दृष्टान्त छँदैछ ।
तत्कालीन समयमा तत्कालिन एमालेले सरकार चलाउन भारतको सर्मथन चाहीने भन्दै महाकाली सन्धी पास गर्ने निर्णय गरेको थियो । मदन भण्डारी र जीबराज आश्रीतको रहस्यमय हत्या अनि दरबार हत्याकाण्डको माध्यमबाट भएको राजा विरेन्द्रको वंशनाश खासगरी भारतीय योजनामा भएको धेरैको बुझाई छ । भुटानको त परराष्ट्र नीति नै भारतको नियन्त्रणमा रहेको थियो । सारमा भन्दा दक्षिण एशियामा भारतको साम्राज्य र प्रभुत्व थियो । तर पछिल्लो समय आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सार्कलाई भारत आफै निष्किृय बनायो । पाकिस्तान सँगको विवादलाई निहँु बनाएर भारतले सार्कको विकल्प खोज्ने प्रयास गर्यो । पाकिस्तान र चीन विनाको क्षेत्रीय संगठन भारतको रुचीको विषय थियो । वास्तवमा सार्कको अघोषित विघटन भारतको असफलता थियो ।
२.दक्षिण एसिया विस्तारै भारतकोे हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र हुन खोज्दैछ
दक्षिण एसियामा भारतको साम्राज्यवादी नीति थियो । साम्राज्यवादको घोषित नीति नै साना र कमजोर देशहरु माथी हस्तक्षेप गरीरहने हुन्छ । अन्य देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, संचार क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कतिपय नेता, पत्रकार, कर्मचारी र अभियन्ताहरुलाई दुतावासबाट मासिक तलव दिनेजस्ता कामहरु भारतबाट भएका छन् । आज पनि भारतीय दुतावासबाट नेता कर्मचारी र उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई रात्रीभोजका नाममा बोलाएर देशका विरुद्ध वा नेताहरुका विरुद्ध बोल्न लगाइन्छ । भारतले नेपालजस्ता देशहरुमा विभाजन वा विखण्डनका लागीसमेत ठूलो लगानी गरीरहेको छ ।
नेपालभित्र कतैै मधेशका नाममा, कतै भाषाका नाममा त कतै धर्र्मका नाममा विखण्डन र विभाजनको षडयन्त्र गरिरहेको देखिन्छ । आज चीन र अमेरिका अनि चीन र भारतवीचको शक्तिसंघर्षले भारतबाट स्वतन्त्रता चाहने देशहरुले विस्तारै प्रयत्न गरीरहेका छन् । आज नेपाल, भुटान र बंगलादेश विस्तारै भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपको चंगुलबाट बाहिर निस्किने र स्वतन्त्रताको श्वास फेर्ने कोशिस गर्दैछन् ।
३.चीनसँगको विवाद पछि भारत कमजोर
अहिले विश्वमा विकसित नयाँ शक्ति सन्तुलनमा भारतले अमेरिकाको पक्षमा लाग्ने निर्णय गर्यो । पहिला अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीत युद्धमा भारत सोभियत संघको कित्तामा थियो । अहिले अमेरिका र चीनबीचको नयाँ शक्ति संघर्षमा भारतले अमेरिकालाई साथ दिने अर्थात चीनलाई नाकाबन्दी गर्ने र प्रतिबन्धित गर्ने रणनीतिमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो । चीनसँग अनावश्यक ब्यापार युद्ध गरेर स्वयं अमेरिकाको प्रभाव विश्वबाट घट्दो छ । त्यसै कारण पनि दक्षिण एशियाबाटै भारत एक्लीदै छ ।
भारत अहिले अमेरिकाको उक्साहट र भड्कावमा चीनका विरुद्ध ब्यापार युद्ध र सीमा युद्धको घोषणा गर्दैछ । तर, अहिलेको अमेरिकासँग भारतको पक्षमा लडिदिने औकात छैन । चीनसँगको विवादले स्वयं अमेरिका हायलकायल र अस्थिर बन्दैछ भने भारतको के हालत होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सायद चीन, अमेरिका र रसियालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडी वढ्ने रणनीति लिएको भए आजको भारतलाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्थ्यो । तर उसले आत्मघाती कदम चाल्यो, अमेरिकालाई उछिन्दै गरेको चीनसँग दुस्मनी साँध्यो । यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रमा हलचल पैदा हुने निश्चित छ ।
४.चीन र भारतबीचको शक्तिसंघर्ष पछि पाकिस्तान बलियो
चीन र भारतबीचको संघर्ष र विवाद मूलतः चीन र अमेरिकाबीचको शक्तिसंघर्षसँग सम्बन्धित छ । चीनका लागी भारत कुनै चिन्ता वा गणनाको विषय हैन । पछिल्लो समय भारत अमेरिकाको कित्तामा सर्यो र अमेरिकी उक्साहटमा ऊ चीनका विरुद्ध लाग्दैछ । स्पस्टै छ, भारतले पुरानो समिकरणको कित्ता परिवर्तन गर्यो । पुरानो समिकरणमा चीन, रुस र भारतबीचको एउटा समिकरण थियो । अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने, एक्ल्याउने र निषेध गर्ने रणनीतिअन्र्तगत भारतलाई प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्योे । त्यसैले त अमेरिका र भारतको एउटै रणनीति छ । फ्रि तिब्बतलाई समर्थन गर्ने, हङकङलाई भड्काउने, दक्षिण चीन सागरमा हुने अमेरिकी नेतृत्वको शैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने, ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने र चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने, भारतमा चिनियाँ व्यापार र लगानीलाई प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता गतिविधिमा भारत सक्रिय भएको छ ।
उता भारतलाई तह लगाउने चीनको आफ्नै रणनीति छ, त्यो हो पाकिस्तानलाई शक्तिशाली बनाउने । दक्षिण एशियामा चीनको बलियो मित्रराष्ट्र पाकिस्तान बनेको छ र उसले एक्लै पनि भारतलाई हल्लाई दिन सक्छ । पाकिस्तान र चीनबीच धेरै ठूलो सहकार्य हुँदैछ । चीनको सहयोगमा पाकिस्तान शैन्य हिसाबले भारतभन्दा शक्तिशाली बन्ने संभावना बढ्दै छ ।
५.चीनसँगको विवाद पछि भारतीय हस्तक्षेप कमजोेर हुँदै
चीन र भारतबीच सम्बन्ध बलियो भएमा दक्षिण एशियामा भारतीय दबदबा, हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमण बढ्छ किनकी चीनले भारतलाई चीढ्याउन चाहाँदैन । तर अहिले यी दुई देशबीचको विवाद पछि लगभग सबै देशहरु भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणवाट मुक्त हुन खोज्दैछन् । सायद चीन र भारतबीचको शक्ति संघर्ष बढ्नु भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको शिकार बनेका नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशजस्ता राष्ट्रहरु स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दैछन र भारतीय हस्तक्षेपलाई इन्कार गर्न सक्ने तहमा पुग्दै छन् ।
६.चीन र भारतको शक्तिसंघर्षवाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणामहरु
भारत मूलतः अमेरिकी मास्टर प्लानमा चीनका विरुद्ध कदम चाल्दैछ । भारतले पहिलो चरणमा चीनसँग सीमा विवाद र चिनियाँ लगानीका थुप्रै व्यापारमाथी प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतले चीनविरुद्ध चाल्न सक्ने कदमहरु के–के हुन सक्लान भनेर समीक्षा गर्ने प्रयास सर्वत्र हुँदैछ ।
चीनका विरुद्ध भारतका प्रारम्भिक कदमहरु निम्न हुने देखिन्छ :
क. चीनसँग सीमा विवाद
ख. चिनियाँ लगानी र व्यापारलाई भारतमा प्रतिबन्ध
ग. फ्रि तिब्बत आन्दोलनलाई सहयोग, समर्थन र उत्प्रेरणा
घ. तिब्बतलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिने
ङ. हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउने
च. ताइवानलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता
छ. दक्षिण चीन सागरमा चीनविरुद्धको संयुक्त शैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने
ज. चीनको सत्ता उलटपुलट गर्नु
भारतका विरुद्ध चीनका जवाफी कदमहरु
जब भारत चीनका विरुद्ध खुलेरै आक्रमणमा उत्रदैछ, तब चीनका सामु जवाफी रणनीतिहरुको विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ । भारतलाई कमजोर बनाउने चीनका रणनीतिहरु निम्न हुन सक्छन् :
क. विवादित जम्मु कश्मिर र पञ्जाबलगायत क्षेत्रलाई पाकिस्तानमा गाभ्नका लागी सहयोग गर्नु
ख. अरुणाञ्चल प्रदेशलाई चीनले आफ्नो भूमिका रुपमा दाबी र कब्जा गर्नु
ग. सिक्किमलाई स्वतन्त्र बनाउनु वा चीनमा समाहित गर्नु
घ. भारतबाट स्वतन्त्र हुन खोजेका राज्यहरुलाई सहयोग गर्नु
ङ. भारतलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने रणनीतिमा काम गर्नु
च. भाकपा (माओवादी)सँग सम्बन्ध विस्तार र सहयोग गर्नु
७.भारत र पाकिस्तानको नक्शा युद्ध पछि चीन–भारतबीचको सीमा विवाद
नक्शा युद्धको शुरुवात भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए । उनले भारतको नयाँ नक्शा अध्यावधी गर्दै पाकिस्तान र नेपालका केही भूमिलाई भारतमा गाभ्ने काम गरे । पछि नेपाल र पास्तिानले पनि आ–आफ्ना नयाँ नक्शा अध्यावधी गरे । पाकिस्तान र भारतविच त अस्वभाविक लाग्ने गरी नक्शा विस्तार गर्ने होडबाजी जस्तै बन्यो । जम्मु , कश्मिर र पञ्जावको सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तान विच ठूलो मतभेद छ । खासगरी मुसलवान वाहुल्यका सीमा क्षेत्रहरु ऐेतिहासिक हिसावले पाकिस्तानका हुन् भन्ने पाकिस्तानको तर्क छ । जम्मु कश्मिरलाई दिएकोे विशेष अधिकार र छुट्टै राज्यको अधिकारलाई मोदी सरकारले हनन् गरेपछि भारतमा असन्तुष्टि तिब्र बन्दैछ ।
८.चीन र भारतबीचको संघर्षमा चेपुवामा पर्ने देशहरु
दक्षिण एशियाको नजरबाट मात्र हेर्दा चीन र भारतविचको शक्तिसंघर्षबाट चेपुवामा पर्ने मुख्य देशहरु हुन्–भुटान , वंगलादेश र नेपाल । एकातर्फ शदियौं देखि भोगेको भारतीय हस्तक्षेपवाट मुक्त हुन चाहनु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो र त्यसका लागी चीनको सहयोग र उत्प्रेरणा सकारात्मक हुनेछ । अर्कोतिर सरकारको चरित्र अनुसार आत्मसर्मपणवादी भएकाले भारतको पक्षमा र चीनको विपक्षमा लाग्न अमेरिकाको पनि नाङ्गो हस्तक्षेप हुने निश्चित छ ।यस्तो अवश्थामा भुटान , वंगलादेश र नेपाल जस्ता देशहरुले के गर्लान भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । समग्रमा भन्दा जव चीन आक्रामक रुपमा आउने छ , तव दक्षिण एशियाबाट भारत एक्लीने निश्चित छ ।
९.दक्षिण एशियामा चीनको नेतृत्व
निश्चित छ, अबको विश्वको नेतृत्व चीनले गर्नेछ । विश्वकै नेतृत्व गर्ने चीनले एशियाको नेतृत्व गर्नु स्वभाविक हुनेछ । तर दक्षिण एशियामा सार्कको नाममा भारतले नेतृत्व गरेको थियो । भारत र पकिस्तानको विवादपछि सार्कलाई जीवन्त राख्न भारत अनिच्छुक बन्यो र दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क) अघोषित रुपमा विघटीत बन्यो । सार्कको अघोषित विघटन भारतको ठूलो असफलता थियो । अहिले विस्तारै घटनाक्रमले नयाँ मोड लिदैंछ । अमेरिका र चीनको विवाद पछि भारतले अकस्मात क्याम्प परिवर्तन गर्यो । रुसको प्रयासमा अझैपनि भारतलाई अमेरिकासँग टाढा राख्नु नै हुनेछ । शायद यसै प्रयासअनुरुप हुनसक्छ चीन र भारतका विदेशमन्त्री विचको सीमा विवाद सम्बन्धी वैठक मस्कोमा बस्यो ।गत विहिवार चीन र भारतका परराष्ट्र मन्त्री विच मस्कोमा भएको दुई पक्षिय संवादवाट ५ वँुदे सहमति भएको घोषणा गरीयो । तर त्यो वैठकले खासै परिणाम दिन सकेको छैन ।
अब भारतलाई पछाडी हट्नु झनै चुनौतिपूर्ण र प्रतिष्ठाको विषय बन्नेछ । भारतले अमेरिकाको सहयोगमा नयाँ शक्तिराष्ट्र वा सुपर पावर बन्ने सपना बोकेको छ । चीनले भारतलाई टक्कर दिन पाकिस्तान काफी छ भन्ने संष्लेषण गरी उसलाई ठूलो सहयोग गरीरहेको छ । भारतले रुसबाट ल्याएका राफेल विमानका विरुद्ध आफैले बनाएका युद्धपोतहरु पकिस्तानलाई बेचेको छ । त्यसकारण भन्न सकिन्छ चीन र भारत विस्तारै युद्धतर्फ मोडीदै छन् । भारत, ताइवान वा साउथ चाइना सि जहाँ युद्ध भएपनि त्यो मुख्यतः चीन र अमेरिकाबीच हुनेछ । चीन र अमेरिकाबीचको युद्धमा भारत प्रयोग भएर उसले आत्मघाती बाटो राज्दैछ । चीनको वरीपरी आएर लड्नु अमेरिकाका लागी सजिलो छैन । फेरी चीन र अमेरिकाबीचको पेचिलो संघर्ष अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मत्थर हुन पनि सक्छ । कतिपय विष्लेषकले भनेका छन कि भारतमा पनि नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अलोकप्रियता र असफलतालाई छोप्न वा विषयान्तर गर्नका लागी चीनसँग सीमा विवादको नाटक गरेका हुन । जे होस् , दक्षिण एशिया अव चीनको प्रभावमा भारतीय हस्तक्षेपबाट विस्तारै मुक्त हुने दिशा तय गर्दैछ ।